Zeziphi Izakhono Ezisebenzisa Ingqondo Ezidingekayo Kwezo Limo?
Kwezo limi, ayizozakhono ezisebenzisa amandla kuphela ezidingekayo (umzekelo ukuqhuba, ukugonya, ukunkcenkceshela okanye ukuthena izityalo) koko nezakhono ezifuna ubuchule bengqondo (soft skills) ezifana nokuthetha ngokucacileyo, ukubonakalisa umdla nokuba nendlela yokuthetha nabantu kunye nokunyaniseka. Khumbula ukuba yonke into oyenzayo ibanegalelo kwindlela omnye umntu akubona ngayo. Qiniseka ukuba oko abanye bakubonayo zizinto ezincomekayo.
Nazi ke izakhono ezidingekayo (soft skills) ukuze ubani abe ngumfama ophumelelayo.
Yiba Ngumntu Ofikelelekayo
Indlela oyiyo kwabanye abantu yiyo ezakusa phambili ebomini ngaphezu kwayo yonke enye into onayo ebomini. Kufuneka ubonakalise umdla emsebenzini wakho kwaye usebenze nzima. Kufuneka ungonqeni ukwenza imisebenzi engabekelwanga wena, kwaye ungathi uhleli nje ube uqumbile. Ukuba ngumntu ofikelelekayo nohlala encumile kwenza kubelula ngakumbi nakwabanye abantu ukuba basebenzisane nawe.
Musa ukuba nempakamo. Xa ukwisikhundla esiphezulu, awunakuba yinkokheli ngenxa yesikhundla sakho. Uba yinkokheli ngenxa yabantu abajonge kuwe.
Yiba ngomnye weqela lakho, kwaye ulikhokele iqela lakho uncedisana nalo. Ukuba abantu bayakuhlonipha kwaye bayazi ukuba ubakhathalele, baza kukwenza inkokheli yabo kwaye balandele umzekelo wakho.
Bonakalisa Ukukwazi Ukusebenza Ngendlela Eyiyo
Ukusebenza ngendlela eyiyo kuthetha ukuthini? Oku kuthetha indlela owenza ngayo umsebenzi wakho. Kuthetha ukuba wenza umsebenzi wakho ngokuzimisela. Gcina ipeni nencwadana yokubhalela empokothweni yakho ukuze ubhale phantsi amanqaku uze ubhale nemibuzo.
Khangela amathuba okufunda banzi, kwaye wenze ngaphaya kokuba kulindelekile kuwe. Ekupheleni kosuku, oku awukwenzeli nje kuphela umqashi wakho, koko wenzela isiqu sakho.
Nyaniseka Maxa Onke
Ukunyaniseka nokuthembeka kusondelelene kakhulu, kodwa ayisiyo nto inye. Ukuba uhlala unyanisekile, umqashi wakho kunye nabantu abakungqongileyo bazakuthemba. Wonke ubani uyazenza iimpazamo, kodwa indlela ojongana ngayo nempazamo zakho yiyo ephela ibaluleka ngaphezu kwempazamo leyo buqu. Ukuba wenze impazamo-encinci okanye enkulu - mxelele umqashi wakho. Thatha uxanduva. Umqashi wakho uzakuvuyela indlela oziphethe ngayo nobukroti bokuma phambi kwakhe ucele uxolo.
Lawula Ixesha Lakho
Xa ukwezolimo, ukufuka ngethuba kubalulekile. Ngapha koko, zama ukufika kwangethuba yonke imihla. Xa uhamba ngenjikalanga, qinisekisa ukuba yonke into imi ngendlela. Ngokwenza oku ubonakalisa ukuba uzimisele. Lomizuzu imbalwa ayenzi mahluko ungako kuwe kodwa isenokwenza igama lakho lihle kumqashi wakho. Ngokwenza oku uyaziqeqesha nawe ukuba uthabathe uxanduva kwaye uzilungiselela naxa sele ukwisikhundla esiphezulu zokuba ngumphathi.
Fika ngethuba ngalo lonke ixesha kuma dinga, umzekelo xa uqonda ukuba kuzakuthatha imizuzu eli 30 ukufika endaweni, hamba kwimizuzu eli 45 ngaphambi kwedinga elo. Yiba nenombolo zomnxeba walomntu uzakuhlangana naye uze ubazise xa kukho into eyenzekileyo enokukwenza ukuba ulibaziseke ungakwazi ukufika kwangethuba.
Enza Umsebenzi Ngendlela Elungileyo
Qiniseka ukuba unazo zonke inkcukacha-oku kungenza umahluko phakathi kokuphumelela nokunga phumeleli. Ukuba unikwe umsebenzi, qiniseka ukuba uwenza kakuhle, ngendlela efanelekileyo.
Ukwenza into ngendlela efanelekileyo akufani nokuhlala entanyeni zabantu. Ukuba unabantu abakusebenzelayo, qiniseka ukuba bayawazi umsebenzi wabo kwaye uyabathemba. Bavumele ukuba bathathe izigqibo mayelana nendawo abasebenzela kuyo.
Ukuba uyabona ukuba kukho umntu odinga uncedo ngomsebenzi, mncede. Akukhathaliseki nokuba uyintoni na lomsebenzi okanye ungubani yena lomntu. Bonakalisa ukuba uyakhathala-Usenokuhamba udinge uncedo lwakhe nawe ethubeni.
Owayesakuba ngumqeqeshwa/apprentice ephantsi kwe Future Farmer, uLunga Ndwandwa ushwankathela ezizakhono zidingekayo kwezolimo ngelithi: ‘Uthando yeyona nto ibalulekileyo. Kufuneka uyithande into oyenzayo. Oko kuchaphazela indlela osebenza ngayo nobomi buba lula. Hlala uba ngowokuqala emsebenzini, ubengowokugqibela ukuhamba. Sebenza ngokungathi usebenza kwishishini lakho. Ukuba wenza njalo, ngenye imini uzakube uzisebenzela kwelakho ishishini nawe.’